Waaxda Caafimaadka Dadweynaha ee Iowa ayaa soo warisay 67 dhimasho dheeraad ah oo la xiriirta COVID- | KWIT
Somali News 12.29.2020
Degmooyinka dugsiga Nebraska waxay ka shaqeynayaan sidii loo go'aamin lahaa inta shaqaalahooda ah ee doonaya tallaalka coronavirus, sidaa darteed saraakiisha caafimaadka ayaa diyaar u ah inay keenaan. Shaqaalaha iskuulku waxay ka mid yihiin kooxaha soo socda ee dadka loo qorsheeyay inay qaataan tallaalka ka dib shaqaalaha daryeelka caafimaadka iyo dadka degan xarumaha daryeelka muddada-dheer ee haatan is tallaalaya.
Barayaashu waxay u badan tahay inay helaan tallaalka bilaha Janaayo ama Febraayo oo ay la socdaan jawaabayaasha koowaad iyo shaqaalaha kale ee muhiimka ah.
Khubarada caafimaadka ee Nebraska ayaa ka walwalsan in isu imaatinka ciidaha Kirismaska ​​iyo Sannadka Cusub ay horseedi karto inuu kordho kiisaska cusub toddobaadyada soo socda. Labadii toddobaad ee la soo dhaafay, celceliska tirada cusub ee kiisaska ayaa hoos u dhacay maalin kasta.
Digniinta duufaanka iyo talo-bixinta xilliga qaboobaha ayaa loo dhajiyay dhammaan Siouxland. Baraf dhexdhexaad ah ama culus ayaa sii socon kara ilaa caawa sida laga soo xigtay Adeegga Cimilada Qaranka. Isu urursiga 3 ilaa 7 inji baraf ah ayaa la filayaa, iyadoo qaddar badan ay suurta gal tahay oo ay weheliyaan baraf daadanaya.